I-Avido WiBa, itshaja engenazingcingo ye-2-in-1 ehambelana nokutshaja kweQi | Iindaba zeGajethi
I-Avido WiBa, itshaja engenazingcingo ye-2-in-1 ehambelana nokutshaja kweQi
Kwaye kungoku nje ukufika kokutshaja ngaphandle kwamacingo kwiimodeli ezintsha ze-Apple, i-iPhone X, i-8 kunye ne-8 Plus, kubonakala ngathi kukho umdla ongakumbi kwiimveliso zokuphehlelela iimveliso ezintsha kweli candelo. Kufuneka kuthiwe kukhululekile ngokwenene ukukwazi ukutshaja isixhobo sakho ngenqanawa yeQi kwaye ngaphandle kwamathandabuzo abo bebesebenzisa olu hlobo lomthwalo ixesha elide baya kuba nam ukuba kungaxhomekeki ekunxibelelaneni nentambo kubenza babe nezixhobo ezinomdla kuyo yonke into.
Kule meko, ukongeza, itshaja yeQi evela kwinkampani ye-Ávido iyakusivumela ukuba sibenezo zimbini sizibhengeza kwisihloko enkosi kukhetho olusivumelayo ukuba siluthathe ibhetri yangaphandle egcwaliswe ngaxeshanye. Le yinto abantu abaninzi abanzima abaya kuyithanda.
I-WiBa, sisiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo esine-extra ebaluleke ngakumbi, I-5.000 mAh ibhetri yangaphandle enokulayishwa kanye phezu koku kwaye Oku kukwangumbuzo ongu-Qi, eya kusivumela ukuba sihlawulise isixhobo ngaphandle kwentambo. Ke, ngale ndlela xa sihlawulisa ibhetri ye-smartphone yethu (nabani na owamkela ukutshaja kwe-Qi) ngaphandle kwentambo, sinokutshaja ibhetri yangaphandle ngaxeshanye ukuze kucace ukuba sizakufika ekupheleni kosuku ngentlawulo I-smartphone yethu. Oku kunokuba kulayishwe "isandwich" esivunyelwa sisiseko WiBa:
Kule meko sisiseko esongeza amanqaku amabini asivumela ukuba senze intlawulo "yoqheliso" entofontofo, ikwahambelana ne "Fast Charge" nangona kuyinyani ukuba ayicacanga ncam kwimveliso emiselweyo ukuba iya Isebenza ngenene nomthwalo we-7.5W. Olunye ulwazi olubalulekileyo kukuthetha kwikamva kunye nesi siseko kwaye yile nto sithi "iyakusebenza" Iyafumaneka ukuze ithengwe esiphelweni salo nyaka u-2018 ngexabiso lokwazisa le- $ 99,95 Ayisiyiyo enye yezona ndawo zibiza ixabiso eliphantsi esiza kuzifumana kwimarike, kodwa ngokuqinisekileyo inokuba sisisombululo esinomdla ngaphezulu komnye wethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » I-Avido WiBa, itshaja engenazingcingo ye-2-in-1 ehambelana nokutshaja kweQi